तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल असोज १४, आइतबार
September 30, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल असोज १४, आइतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यावसायमा लगानि बढाई प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलेकै भरमा कामहरु सम्पादन हुँनेछन् । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा खर्चियको समयबाट सकारात्मक नतिजा आउँने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ भने अध्ययन तथा […]
तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ३ गते, आइतबार
August 19, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ३ गते, आइतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : व्यापारमा मनग्गे लाभ हुनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जाने योग रहेको छ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आए पनि हल गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । दिदी बहिनीहरूको सहयोग पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । चिट्ठा […]
तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन २७ गते, आइतबार
August 12, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन २७ गते, आइतबार
राशी अनुसार तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? राशिफल साउन १३ गते, आइतबार
July 29, 2018 Spnews Comments Off on राशी अनुसार तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? राशिफल साउन १३ गते, आइतबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सम्मानित काम गरी सबैको मन जित्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा गरिरहेको काममा बढुवा हुने योग रहेको छ । पारिवारिक माहौलमा भेला भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण […]
आजको तपाईको भाग्य यस्तो छ हेर्नुस राशिफल साउन ६ गते, आइतबार
July 22, 2018 Spnews Comments Off on आजको तपाईको भाग्य यस्तो छ हेर्नुस राशिफल साउन ६ गते, आइतबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पढाई लेखाइकै सवालमा देश विदेशको यात्रा तय हुनेछ । माया प्रेमको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्ने सहमति जुट्नेछ । मध्यान्हबाट कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने हुँदा दुख पाउने समय रहेको छ भने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नजान्दा […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार २४ गते, आइतबार
July 8, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार २४ गते, आइतबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ ) स्वास्थ्यमा आउने समस्याका कारण कामहरू प्रभावित हुनेछन् । आत्मबल तथा मनोबल कमजोर हुने हुँदा आँटिला तथा पराक्रमी क्रिर्याकलापमा पछि परिनेछ । समाजमा तपाईँको कामको आलोचना हुनेछ । आफन्त तथा पुर्वजहरुसँग सामान्य कुरामा […]
तपाईको आजको भाग्य हेर्नुस राशिफल : असार १० गते, आइतबार
June 24, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य हेर्नुस राशिफल : असार १० गते, आइतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : अरूले गर्न नसकेका कामहरू तपाइबाट हुने हुनाले प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ । समस्या पर्दा साथ दिनेहरू प्रशस्त भेटिने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । परिवारका साथ देश विदेशको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । स्थाई […]